Misy zavatra mitaky fotoana. Mijanona ho manam-paharetana ary mijanona ho tsara, hihatsara ny zavatra. - Anony - Quote Pedia
Milaza izany fa nisy renirano iray nandona vatolampy tsy noho ny heriny, fa noho ny fikirizany. Midika izany fa tokony hanana faharetana isika ary hanao ezaka tsy tapaka ary, mandritra izany fotoana izany, hanatsarana ny tenantsika miandalana sy mandeha amin'ny fotoana hahatratrarana ny tanjontsika.
Mety hieritreritra ny hoe "tsy misy ilana azy noho ny mpiara-miasa amiko", saingy raha ny marina, tsy izany mihitsy. Niorina amin'ny asa tsara sy ratsy ataontsika isika. Samy manana ny famantaranandro samy hafa ny olon-drehetra, ny toetran'ny Timing dia samy hafa tanteraka amin'ny hafa, ary azo antoka fa hitranga amin'ny tontolo iray miaraka amin'ny vahoaka sy ny kolontsaina ary fiteny samy hafa.
Tsy mitovy ny fahasamihafana eo amin'ny tantaram-piainan'ny tsirairay, ny tsirairay avy dia asan'ny sangan'asa, rehefa manao ezaka isika hahatakatra azy ireo marina. Milaza io fa ny zavatra ho avy aorian'izay dia maharitra ihany. Raha ny marina, ny zava-misy dia rehefa tonga ny toerana mety aminy, dia azontsika atao ny mamirapiratra kokoa.
Araka izany, zava-dehibe ny manome fotoana ho an'ny tenantsika, ny fotoana ihany no singa tokana eto amin'ity tany ity izay manasitrana ny zava-miseho hafahafa rehetra. Manana fahefana feno fanasitranana tanteraka izy. Ny mahagaga fotsiny dia rehefa tonga ny toerana amin'ny fotoana mety, amin'ny toe-javatra mety, ary afaka milaza farany isika io hoe eny, nanao azy isika.
Tokony hataontsika an-tsaina fa tsy maharitra ny fahombiazana ary tsy maharitra koa ny fahombiazana. Ny iray manohy manamboatra ny endriny isan'andro mba ho tsara kokoa, somary miroborobo, matanjaka kokoa. Ny fanatsarana ny fotoana sy ny fananana finoana ny tenantsika manokana no lakilen'ny fahalehibeazana.
Ao amin'ny tontolo manova harena, ny hany fiovan'ny tsy maharitra dia tsy azo ihodivirana. Matokia an'Andriamanitra ary minoa ny tenanao. Ny zavatra sasany dia tsy mila fotoana hanamboarana ny tenantsika ho lasa olona mahay za-draharaha sy mahay paikady.
Mandahatra ny fotoana iray. Fitsapana anao eo imasom-bahoaka izany, manala baraka anao eo imason'ny besinimaro, fa manome valisoa anao irery. Amin'ny fotoana iray dia manaporofo ny maha izy azy ho tompon'ny asany eo amin'ny sehatry ny asany ny olona very ary mahagaga ny asany.
Teny marika manam-paharetana
Quote ho amin'ny faharetana
Zavatra misy teny
Mijanona ho marika teny fohy
Mijanona sary tsara
Mijanona ho valin-teny fohy
Fanomezana iray ny fiainana. Ampiasao tsara. - Anonyme
Fanomezana iray ny fiainana. Ampiasao tsara. - Teny nindramina tsy fantatra anarana:
Aza mamaly mihitsy rehefa tezitra ianao. Aza manao toky rehefa faly ianao. Aza manapa-kevitra mihitsy rehefa malahelo ianao. - Anonyme
Voalaza fa ny fotoana sy ny fanapahan-kevitra no antony roa lehibe indrindra amin'ny fiainana ary tokony…
Ny olona tsara toetra koa dia manana eritreritra ratsy. Tsy avelan'izy ireo hifehy azy ireo fotsiny izy ireo. - Anonyme
Misy lafiny roa amin'ny vola madinika iray, sa tsy izany? Toy izany koa, manana olona tsara ihany koa ny…
Indray andro any dia hahita indray ianao ary hahatsapa fa ny zavatra rehetra nanjo anao, na ny tsara na ny ratsy, dia nitondra anao tany amin'ny toerana tsara kokoa noho izany dia mampatanjaka anao. - Anonyme
Indray andro any dia hahita indray ianao ary hahatsapa fa izay rehetra nanjo anao, na tsara na ratsy,…